မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Honeymoon to New Zealand Day9: On the way to Christchurch (South Island)
ရှုခင်းတွေက လှလိုက်တာ.. လှလိုက်တာ.. လှလိုက်တာ.. လှလိုက်တာ.. လို့ တဖွဖွရွတ်ရင်း ဖတ်သွားပါတယ်။
အစားအသောက်ဈေးလေးတွေ ထည့်ထားတော့ သွားလည်မယ့်သူတွေအတွက် အညွှန်းကောင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်။
ဟုတ်တယ်.... တော်တော်လှတာ။ ဒါတောင် ကားပေါ်ကနေ မှီသလောက် လှမ်းရိုက်ထားလို့။ ပြတင်ပေါက်တွေရယ် ကားမှန်က အညစ်အကြေးတွေရယ် သေချာကြည့်ရင် ပါနေလို့ ဓာတ်ပုံတွေက သိပ်မကြည်ဘူး။ ကားမှန်ဘောင်တွေကို ပြန် crop ထားရတယ်။ ဈေးတွေကိုတော့ မှတ်မိသလို ထည့်ပေးထားတယ်။ နောက်မှ ကုန်ကျစရိတ်ပိုစ့် သက်သက်ရေးမလားလို့
3/17/2016 11:49 PM
Chan Nyein Aung said...
I always read your posts.It's all good and interesting.I also love travelling.Keep writing sis.
3/25/2016 11:49 AM
Thank you so much Chan Nyein Aung. I know you have been my travel post reader for very long. ခုလို အမြဲမပြတ် ခရီးသွားပိုစ့်တွေကို အားပေးနေလို့ သေသေချာချာကို မှတ်မိပြီး နာမည်နဲ့ ရင်းနှီးနေတာကြာပါပြီ။ ခုမှ ဘလော့ပေါ် ပထမဆုံး ကွန်မန့်ရေးတယ်ထင်တယ်။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တော့ အမြဲတွေ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
3/25/2016 11:47 PM